कसले किन्यो आइन्स्टाइनको सापेक्षतासम्बन्धी पाण्डुलिपि ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कसले किन्यो आइन्स्टाइनको सापेक्षतासम्बन्धी पाण्डुलिपि ?
प्रकाशित मिति : २०७८, ८ मंसिर बुधबार ०९:४०
अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सापेक्षतासम्बन्धी सिद्धान्त तयार गर्ने प्रयास गरिरहँदा गरेको हिसाबकिताबको एउटा पाण्डुलिपि १ करोड ३० लाख डलरमा लिलामीमा बिक्री भएको छ ।
पेरिसस्थित क्रिस्टिको लिलामी घरमा भएको यो बिक्रीले वैज्ञानिक दस्तावेजको लिलामीको कीर्तिमान तोडेको छ । सैद्धान्तिक भौतिकशास्त्रीको महान् वैज्ञानिक काम देखिएका उपलब्ध दुई मध्ये यो एउटा कागज हो । सन् १९१५ मा प्रकाशित यो सिद्धान्तले मानवजातिको अन्तरिक्ष, समय र गुरुत्त्वाकर्षणबारेको बुझाइ परिवर्तन गरिदिएको थियो ।
हिसाबकिताबको यो पाण्डुलिपि आइन्स्टाइन र उनका स्वीस सहकर्मी मिसेल बेसोले सन् १९१३ र १९१४ तयार गरेका थिए। यी कागजात पनि बेसोले नै राखेका थिए । क्रिस्टिको लिलामी घरले यी पाण्डुलिपिलाई जोगाएर राख्ने बेसोको सोचको तारिफ गरेको छ ।
पाण्डुलिपिमा कालो कलमले हिसाबकिताब गरिएको छ र बेल्लोएका अनुसार सिद्धान्त तर्जुमा गर्ने दौरान त्यहाँ थुप्रै गल्ती देखिन्छ । लिलामी घर क्रिस्टिले यो बिक्रीले यी कागजातको महत्व बुझ्ने विश्वभरिका सङ्ग्रहकर्तालाई आकर्षित गरेको जनाएको छ ।
तर ५४ पृष्ठको यो पाण्डुलिपि कसले खरिद गरेको भन्ने खुलाइएको छैन । आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तले ब्रह्माण्ड, ग्रहका कक्ष र ब्ल्याक होलको उत्पत्तिमा थप स्पष्टता ल्याएको थियो । गत मे महिनामा आइन्स्टाइनको सबैभन्दा चर्चित E=mc² इक्वेसनबारे उनले लेखिएको पत्र १२ लाख डलरमा अमेरिकामा बिक्री भएको थियो।